Mogadishu Journal » 2019 » May » 2
Axmed Madoobe “Waxaan walaac ka qabnaa in Muqdisho nooga yimaadaan falal lid ku ah amniga Kismaayo”
Mjournal :-Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay inuu walaac ka qabo falal lidi ku ah dhinaca ammaanka Kismaayo oo laga soo abaabulayo magalaada Muqdisho. Axmed Madoobe oo maanta duhurkii Shir Jaraa’id ku qabtay Kismaayo, kaddib markii uu ka soo...
Maraykanka oo dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo hore u dilay askari Maraykan ah
Mjurnal :-Maraykanka ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen sarkaal ka tirsan Alshabaab oo hore u diley askari ka tirsanaa ciidamada Maraykanka oo lagu diley deegaanka Bar Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Duqeyn ay ciidamada Maraykanka geysteen bishii April 19keedii ayaa labo ka...
Xildhibaano ka hadlay ansixinta Sharciga doorashooyinka iyo kan Axsaabta
Mjournal :-Duhurnimadii Maanta ayaa Xubnaha Golaha Wasiirada Soomaaliya waxa ay ansixiyeen Sharciga doorashooyinka iyo Sharciga Axsaabta Siyaasadda oo Dib-u-eegis lagu sameeyay,waxaana tallaabadaas soo dhaweeyey Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka Soomaaliya. Xildhibaan Axmed...
Dowladda Somalia oo sheegtay in uu isku soo dhiibay Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab
Mjournal :-Yuusuf Axmed Cadow oo Al-Shabaab u qaabilsanaa Qeybta Qaraxyada ayaa maanta isku soo dhiibay Ciidamada Xoogga Dalka Gaar ahaan Kuwa Ka howlgala Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobalka Gedo, sida ay baahisay Warbaahinta Dowladda. Yuusuf oo xiriira kale duwan la soo...
Mjournal :-Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa xariga ka jaray Warta Biyo-qabadka Degmada Waaberi oo Maamulka Gobolka Banaadir uu dayactir ballaaran ku sameeyey. Guddoomiyaha ayaa sheegay in Warta Biyo-qabadka KM4...
Golaha Wakiilada Soomaaliland oo ka hor-yimid xaaladii deg dega aheyd iyo buuq ka dhashay
Mjournal :-Xildhibaannada Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa Maanta waxaa ay kulan ka yeesheen xaaladii deg dega aheyd ee uu Maalin ka hor deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag kusoo rogay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhawaan xaalad deg deg ah oo socon...
Mjournal :-Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, kaddib markii ay shalay la wareegeen deegaanka Bariire oo Afgoye u jira 30KM. Sida wararku sheegayaan Ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan Guutada Danab...
Barcelona ayaa Camp Nou ku soo dubatay Liverpool iyada oo Blaugrana lug la sii gashay finalka UEFA Champions league. Luis Suarez ayaa goolka furitaanka qaybtii hore ee ciyaarta u dhaliyay Barcelona laakiin Lionel Messi ayaa laba gool raaciyay qaybtii labaad ee ciyaarta. Inkasta...
Mjournal :-War kasoo baxay Taliska Mareykanka ee Qaarada Afrika ee loo yaqaano (Africom) ayaa waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu Gobolka Jubbada Hoose ku diley Sarkaal ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab kaas oo horay u diley Askari ka tirsanaa Ciidamada Mareykanka. Afhayeenka ...
Mjournal :-Maanta oo Khamiis ah ayaa la filayey in Magalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal Puntland uu ka dhaco shir u dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada dalka ka jira, hayeeshee shirkaasi uu dib u dhac ku yimid. Madaxweynaha Dowlad goboleedka...